Webtrends 9 Ebube: Karia Ihe Niile Na-atụ Anya | Martech Zone
Na Eprel 2009, Webtrends CEO Alex Yoder guzoro n'ihu ndị ahịa ya, ndị nta akụkọ, ndị nyocha na ndị ụlọ ọrụ ya ma kpebisie ike na Webtrends ga-anapụta ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ. M jụrụ ajụjụ… did Webtrends mere ka ọ gbanwee onwe ya ka ọ bụ na a na-alọ ụwa?
Azịza ya bịara taa… Alex na ndị otu ya nwere Nyefere... Webtrends is amugharia!
Enwere m ohere iji tinker na interface Webtrends ochie ma ọ dị ka ọ dị afọ iri (ọ nwere ike bụrụ!). Ọhụrụ interface na Webtrends 9 mara mma, dị mfe, dị ọcha ma nwee arụmọrụ pụrụ iche. Ọ dị gị ka ị nọdụrụ ala na Mercedes ọhụrụ.
Ozugbo i mechara banye nkọwa na akaụntụ enyere, ị nwere ike na-agagharị n'enweghị nsogbu ma ọ bụ site na akụkọ iji kọọ, akaụntụ gaa na akaụntụ, ma ọ bụ họrọ echiche dị iche iche (n'elu aka nri):
Echiche ndị a nwere atụmatụ nke di na nwunye nke onwe ha, dịka akụkọ anya… Nke na-adọta data gị ma tinye ya na Bekee nkịtị. Nke a bụ atụmatụ dị nkọ maka mkpesa ndị isi:
E nwere ihe a table echiche… nke ị nwere ike n'ụzọ nkịtị idetuo na mado ma debe usoro sel:
E nwere abụọ atụmatụ mgbanwema, nke ahụ dọọrọ mmasị m.
Akụkụ mbụ kwesịrị ịbụ atụmatụ na ngwa agha nke nzukọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ha chọrọ ime ka nyiwe ha dị mfe ijikọ. Njirimara ahụ bụ ikike ịpị òkè ma weghachite data ahụ n'ezie Excel, XML ma ọ bụ weghachite ezigbo ezumike API oku na-aga! Chaị!
Nnukwu atụmatụ m kwenyere na ọ ga-eme ka ntọala nke ụwa Analytics maa jijiji machie ndepụta RSS ọ bụla na data gị! Zụ ahịa n'ịntanetị agbanweela n'ụzọ dị ịrịba ama n'ime afọ ole na ole gara aga na ọnụọgụ saịtị na-emetụta stats n'ịntanetị. Ike ikpuchi a Chọọ Twitter, News, gị Blog, ihu igwe… ndepụta adịghị agwụ agwụ!
Ọhụrụ interface interface na-mepụtara ha API - agagharị nke na-enye mgbanwe dị egwu na ịmepụta ụdị ọhụụ, akụkọ ọhụrụ na atụmatụ ọhụrụ.
Kudos na Alex na ndị otu ya na Webtrends. All ahịa kwagara ọhụrụ interface taa na mmeghachi omume nwere adị ezigbo mma.
Ekwuru m na ọ na-agba na iPhone, kwa?
Tags: webụsaịtịonyebuchi 9
PhoneGap: Mmepe Ngwa Ngwa-Cross-Platform